Thierry Henry oo Mushaarkiisa hoos u dhigaya si uu Tababare ugu noqdo Maxamed Saalax…(Sidee??) – Gool FM
Thierry Henry oo Mushaarkiisa hoos u dhigaya si uu Tababare ugu noqdo Maxamed Saalax…(Sidee??)
(Europe) 01 Agoosto 2018. Rugcadaagii hore ee Arsenal Thierry Henry ayaa usbuucii hore lala xiriirinayay inuu noqdo macalinka Cusub ee naaddiga Aston Villa, balse waxaa iminka soo shaac baxay inuu u sharaxan yahay inuu tababare u noqdo xiddiga Liverpool ee Maxamed Saalax.
Xiriirka kubbada cagta dalka Masar ayaa doonaya in Henry ay badel uga dhigaan Hector Cuper.
Macallinkii hore ee Inter Milan Cuper ayaa xilka laga xayuubiyay kaddib markii laga wada adkaaday saddexdii kulan uu Masar ku hogaamiyay koobka adduunka.
Henry oo 40-jir ah ayaa iminka ah tababare ku xigeenka xulka Belgium oo kaalinta saddexaad ka soo galay koobkii Adduunka.
Warar dhawaan gal ah ayaa tibaaxaya in Henry uu aqbalay inuu mushaar yar ku qabto xilka xulka Masar si uu tababare ugu noqdo Maxamed Saalax iyo sidoo kale xiddigaha reer Masar ee iyana ka ciyaara horyaalka Premier League sida laacibka Arsenal Mohamed Elneny, Ramadan Sobhi ee u ciyaara Huddersfield, Ahmed Elmohamady ee ka tirsan Aston Villa, Daafaca West Brom Ahmed Hegazy iyo waliba xiddiga Wigan ee Sam Morsy.
Juventus iyo AC.Milan oo ugu danbayn heshiis wada gaaray (Higuain oo maraya dhanka Milan iyo Bonucci oo maraya dhanka kale)
"War jooga oo hadda iga IIBIYA Real Madrid haddii kale".- Goolhaye Courtois oo Chelsea ugu Goodiyay in...